PTFE Rod & Tube Extruder, mpanamboatra milina PTFE- SuKo
SuKo Polymer Machine Tech Co., Ltd. dia mpanamboatra manam-pahaizana ary mpanondrana ny milina PTFE & UHMWPE ary vokatra manana traikefa mihoatra ny 12 taona. Ny vokatra rehetra dia manana kalitao mahazatra ary nandalo ny fanamarinana CE, ISO & SGS. Manana laza tsara izahay eo amin'ny tsena Eoropeana, Etazonia, Moyen Orient & Azia. Mino izahay fa manome fahafaham-po ny mpanjifa ary manome azy ireo entana amin'ny vidiny manintona. Namokatra milina PTFE / UHMWPE plastika izahay izay nanondrana any amin'ny firenena maro miaraka amin'ny fiasa tsara. Masinina lehibe: PTFE & UHMWPE Rod Ram Extruder, tsipika milina Tubing Ram Extrusion, Masinina Press Gaskets ary Paste Extruder, Machine Skiving Machine, Machine Extrusion Plastika, PTFE Tubing & Rod polymer PTFE, ravina PTFE, horonantsary ary fantsom-borosy vita amin'ny polymer PTFE…
Hijery misimisy Mifandraisa aminay
Fampisehoana tranga mahazatra
Lafaoro manokana PTFE baikoin'ny mpanjifa belza
Nalefa tany amin'ny mpanjifany Singapore i PFB150 Rod Extruder
Fitaovana sy bobongolo PTFE alefa any Rosia
Fametrahana sy fanirahana toerana ho an'ny orinasa mpanjifa Hebei
Fametrahana milina fanamafisana plastika PTFE
Gazety Bush mandeha ho azy nanafaran'ny mpanjifa karana teny an-toerana
Extruder milina mandeha ho azy polymer PTFE Rod Ram ...
Polymer UHMWPE Rod Bar Ram Extrusion Machine Di ...
Polymer UHMWPE Rod Ram Extrusion Machine Dia 80 ...
karazana mitsivalana Polymer PTFE Rod Round Bar Singl ...
Polymer Vertical Type Tube Ram Extruder Machine ...
40 TANY +
8 OLONA +
Ny ozinay dia miavaka amin'ny haitao mandroso.
Mampiasà fitaovana avo lenta sy mahira-tsaina hamoronana vokatra avo lenta.
Professional Aorian'ny varotra
Ny tsara indrindra aorian'ny serivisy aorian'ny komisiona toerana.
Manam-pahaizana amin'ny fitrandrahana PTFE / UHMWPE sy vokatra amina karazana isan-karazany, Suko dia lohalaharana amin'ny indostria Tetrafluorohydrazine miaraka amin'ny fanavaozana ny haitao, ny asa ary ny faharanitan-tsaina na eto an-toerana na any ivelany.
Ny fluoroplastic antsika dia be mpampiasa Ny vaovao farany